Chekutanga beta yeWOSOS 6.2.5 inowanikwa kune vanogadzira | Ndinobva mac
Chekutanga beta yeWOSOS 6.2.5 inowanikwa kune vanogadzira
Mazuva mashoma apfuura, munaKurume 24, iyo watchOS 6.2 vhezheni yakaburitswa kuruzhinji. Iye zvino isu tinotanga mutsva bvunzo kutenderera pane nyowani software yeiyo American kambani yekutarisa. Parizvino iyo watchOS 6.2.5 yekutanga beta
Kunyangwe iyo yekuverenga isiri iyo yakajairwa iyo, zvakatoitwa kare kudaro hapana kushamisika zvakawandisa pamberi peiyi nyowani yekuedzwa.
Iyo watchOS 6.2.5 beta 1 edition yevagadziri chete
Vagadziri vacho havamire uye Apple haina kudaro. Ikozvino yave kuwanikwa yekutanga vhoriyamu yeOSOS 6.2.5 beta kuitira kuti avo vanozvigadzirira yavo wachi vagone kuona ramangwana nhau dzingaitwe muApple Watch mune ramangwana.
Isu tatoziva kuti runyerekupe rwunoisa nyowani yeropa okisijeni mita muwatchOS 7 pamwe ne yakatarwa modhi yevana. Zvichakadaro isu tatova nemukana wekuongorora iyo nyowani vhezheni ichauya pamberi. watchOS 6.2.5 panguva ino haipe chero chinhu chitsva kana zvirinani haina kunge yaonekwa munguva pfupi yave kuwanikwa.
Parizvino iyi vhezheni itsva inogadzirisa madhiragi uye inokurudzira kugadzirisa mashandiro uye kugadzikana. Nekudaro, kuve beta, zvinokurudzirwa zvakasimba kuti irege kuiswa pazvigadzirwa zvekutanga uye pane zvechipiri zvigadzirwa. Icho chikonzero chakanyanyisa ndechekuti kuve beta, haina kuregererwa kubva pazvikanganiso zvinogona kusiya chishandiso chisingashandisike kana nezvikanganiso zvakakura zvinoita kuti chishandise, zvichinetsa.
Tichave takaterera kuti tione kana paine chero nhau mune iyi vhezheni itsva uye isu tinokuudza iwe nekukurumidza sekuziva kwedu. Parizvino, kana iwe uri mugadziri, unogona kurodhaunirodha kubva kune yayo webhusaiti uye kana uchida iwe unogona kutiudza kana iwe wawana chero chinhu chitsva, kupfuura izvo zvataurwa pamusoro apa uye kugadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Chekutanga beta yeWOSOS 6.2.5 inowanikwa kune vanogadzira
Apple inopeta mupiro kuChina kuti irwise Covid-19
Iyo Chrome browser inotiyeuchidza kuti tisakanganwa nezve Flash isati yapera 2020